Madaxweyne Farmaajo iyo R/wasaare Kheyre oo lagu dheganyahay! – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Oct 22, 2018
HornAfrik-Waxaa maalinti labaad ka socda magalada garoowe ee Puntland shirka u dhaxeeya xubnaha Golaha iskaashiga dowada Goboledyada kaasi oo ay kaga hadlayaan khilaafka kala dhaxeya dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Madadda ayaa maanta la soo shegay ain ay si gaar ah shirkooda diiradda ugu saarayan waxa xiga tilabadi ay ku dhawaaqeen 8-dii bsihii Sep kaasi oo ay xiriirka ugu hakiyeen dowladda federalka ah ee Soomaaliya.
Shirka maanta ay ah mid albaabada u xiran oo ay warbaahinta dibad jog k tahay.
Lama oga qodobada ay ka soo saari doonaan iaydoo lagu wado in iklaa birito u shirka socdo.
Sidoo kale waxaa la so warinayaa in qaar kamdi ah maaxda ay maanta shirkooda kaga hadleen warki golaha aqalka sare ka soo baxay maalin kahor ee muddo loogu qabtay madaxwyenaha iyo ra’iisal wasaraha in ay kaga jawaaban tabashooytina madaxda mamaul goboledyada.
Dhinaca kale wali waxaa ay Golaha qalka sare sugayaan jawaab kaga timaada madaxtooyada iyadoo manta ay ku egtahay mudada ay u qabten madaxda in ay kaga jawaabaan cabashada dowlada goboledyada.
Ilo u waramaya HornAfrik ayaa sheegay in Golaha aqalka sare aysan ku qancin warqaddi shalayo ka soo baxday Wasaaradda rimh gudha eek u adneyd khilaafka kala dhaxeya maamul goboledtyada
Dilal Muqdisho maanta ka dhacay.